April 2014 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
''ခရိုနီတစ်ဦးပြောပြသော တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးထက်ကိုက်တဲ့ လူကြီးမွေးမြူရေး (၃)''
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာ ခင်ဗျားပြောတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက် မိန်းမကို ရွှေပုတီးကြီး လက်ဆောင်ပေး၊ အဲဒီလူကြီး ဧည့်ခန်းထဲကို ဒူးနှစ်ချောင်း ထောက်ဝင်တာ ဘယ်ခရိုနီလဲဆိုတာ ပရိသတ်က အရမ်း သိချင်နေကြတယ်လို့ မေးမိတော့ ခရိုနီကြီးက ရယ်ပြီး နာမည်တော့ မပြောပါရစေနဲ့။ ခင်ဗျားရေးရင်း အဲဒါ ဘယ်သူဆိုတာ စာဖတ်ပရိသတ်က သိလာပါလိမ့်မယ်။
Author: lubo601 | 5:05 PM | No မှတ်ချက် |
Sai Sai shared her photo.
လှေစတင်ထွက်သောအခါ ဆရာက လှေသမားအား......" ခင်ဗျား သချာင်္ဗေဒတတ်သလား"" ကျွန်တော် မတတ်ပါဘူး""ရူပဗေဒ တတ်သလား""ဒါလဲ မတတ်ပါဘူး"" ဒါဆိုရင် ခင်ဗျား ကွန်ပျူတာသုံးတတ်သလား"
True Man's photo.
ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ကို မြိန်ရေယှက်ရေ စားရဖို့ မလွယ်လှကြောင်း အမေက ခဏခဏပြောပြဖူးတယ်။ သူမအနေနဲ့စိတ်ရှည်ရှည်ထားရကြောင်း၊ ဟင်းထဲကို ထည့်မယ့် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို အချိုးညီ အချိန်အဆညီအောင် ပေါင်းစပ်နိုင်ရကြောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာရကြောင်းတွေလည်း ပြောပါတယ်။
Acute Heart Attack Treatment ရုတ်တရက် နှလုံး အတက် ရရင် ဘာလုပ်ရမလဲ
Author: lubo601 | 4:35 PM | No မှတ်ချက် |
(၃) MI နှလုံး သွေးမဝဖြစ်တာသေချာရဲ့လား စစ်ဆေးပါ။ ECG ရိုက်ရင် ST-segment elevation ဆိုတာတွေ့ရင် သေချာတယ်။ အဲဒီထက် သက်သာတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ စစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်ရမယ်။
“အိုဘားမားဖုန်း ဆိုတာဘာလဲ” ဆိုပြီး မိတ်ဆွေတဦးက မေးလာလို့ ကျနော် သိသမျှလေး ပြန်ရှယ်ချင်စိတ် ဖြစ်လာမိတယ် …
ဟိုတနေ့က ကိစ္စရှိလို့ သူ့ကိုဖုန်းခေါ်တဲ့အခါ ကျနော်သုံးနေကျဖုန်း အပြင်ပါသွားလို့ တခြားဖုန်းတလုံးနဲ့ ခေါ်လိုက်ရတယ်။
Author: lubo601 | 4:34 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 4:31 PM | No မှတ်ချက် |
ဆယ်တန်းကို မိဘတွေအလိုကျ ဖြေရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်ကို အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ မမျှော်လင့်ဘဲ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်တာဟာ ဘုန်းကြီးရဲ့အကျင့်ပဲ တဲ့။
ဟိုတစ်ရက်သားက လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုမှာ စကားနာလား စကားပြာလားမသိတစ်ခု ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အဘဦးဝင်းတင်ခမျာလူပျိုကြီးပေမို့ပေါ့ဗျာတဲ့၊ များလိုက်တဲ့သားသမီးတွေ…တဲ့။ သူဘာသဘော ပြောနေလည်း ကျနော်နားမလည်ဘူး။ ထားပါတော့ ဒီလိုနှလုံးသားကြီးကြီးထား၊ သမီးသားတွေပွားစီးသွားတာ … ကျနော်တော့ပျော်တယ်။ အဘစကားတွေ အဘတရားတွေ အဘရုပ်ပုံတွေ အဘရုပ်စုံတွေ တင်ကြ ရေးကြ သားကြတာ လိုအပ်တယ်။ အဘရဲ့မူလဆန္ဒ သဘောတရားရည်မှန်းချက် အညွှန်းကိန်းတွေ မပျောက် ပျက်ဘူး ဆိုရင် ကောင်းတယ်။ ကျနော် တော့ဒီလိုသဘောထားပါတယ်။
ပို့စ်တင်ချိန် - 4/29/2014 04:27:00 PM
ကလေးတိုင်းဟာ အသက် ၅-၆ နှစ်ဆိုရင် ဆီးကို ထိန်းနိုင်လာကြပြီ။ သွားရမဲ့နေရာကြမှသာ ဆီးသွားတတ် လာမယ်။ တလထဲမှာ ၂ ခါလောက် အိပ်ရာထဲရှူပါရင် Bed wetting (Enuresis) ခေါ်တယ်။ စိတ်ဖိအားများရင်၊ ကြောက်စိတ်ဝင်ရင် လူကြီးတွေထဲက အမျိုးသမီးတွေပိုဖြစ်ကြတယ်။ ဆီးလမ်းကြောင်း တည်ဆောက်ထားပုံ၊ ကလေးမွေးဖွါးရတာ၊ သွေးဆုံးတာ၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာတွေကြောင့် ပိုများရတယ်။
၁။ Google အင်တာနက်မှ ရှာဖွေနည်းများ - မျိုးသူရ
၂။ Using Facebook - ဇော်လင်း
၃။ အင်တာနက် Website လမ်းညွှန်နှင့် Facebook အသုံးပြုနည်း - သူရအောင်
၄။ Peachtree Accounting (Computer Accounting Software) - ဝေဖြိုးအောင်( NATOGYI)
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ADB)၏ ၂၀၁၄ မြန်မာ့စီးပွားရေးအလားအလာသုံးသပ်ချက်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အားကောင်းခြင်း ကြောင့်ယခင်နှစ်က ဂျီဒီပီတိုးတက်မှု နှုန်း မြန်ဆန်လာခဲ့ပြီး ယခုနှစ်နှင့် နောင်လာ မည့်နှစ်တွင်လည်းပို၍တိုးတက်မှုရမည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။ အစိုးရကစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရှိန်အဟုန်ကိုဆက် လက်ထိန်းထားနိုင်သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်ရေးသည်အစိုးရ၏အဆင့်အသီးသီးတွင် စွမ်း ဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာရေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ တောင့် တင်းခိုင်မာရေးတို့အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ထို့အပြင်အားလုံးဝိုင်းဝန်း၍ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ကြရန်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဝေမှု တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာ ရန်လည်းလိုအပ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၃) ရက်
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်များက ပူပြင်းခဲ့သော်ငြား၊ဤရက်ပိုင်းအတွင်း ဖူးခက်မှာ မိုးတပြိုက်နှစ်ပြိုက်ရွာသည်။ မုတ်သုန်၏ ရှေ့တော်ပြေးလော၊ ပျံကျမိုး လောမဝေခွဲနိုင်ချေ။ဖူးခက်သည် ပင်လယ်ပြင်ထဲက ကျွန်းငယ်ဖြစ်လေရာ အပူရှိန်ပြင်းသည့်နေ့ရက်များတွင်ပျံကျမိုးရွာလေ့ရှိသည်။ သေချာ သည်ကား မကြာမတင်ရက်ပိုင်းကာလ မေလဆန်းလျှင်ဖြင့် ဖူးခက်သို့ မုတ်သုန်ဝင်တော့မည်။
တစ်ခါတော့ အမေဖြစ်သူနဲ့ သမီးဖြစ်သူနဲ့ ရှော့ပင်းထွက်ကြသတဲ့။ သူတို့က ဖိနပ်ဆိုင်ရောက်တော့ ၀င်ကြည့်ပြီးတော့ ဖိနပ်တွေအမျိုးမျိုး စီးကြည့်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အမေဖြစ်သူသာ ဖိနပ်ရသွားတယ်။ သမီးဖြစ်သူကတော့ စိတ်တိုင်းမကျနိုင်ဖြစ်နေတယ်။
သံချောင်းနိုင်ငံတော် ပုံပြင် . . .
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက သံချောင်းနိုင်ငံတော်ကြီးရှိသတဲ့ကွယ် ။ အဲ့ဒီသံချောင်းနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ
မင်းကျင့်တရားနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်တဲ့ သံချောင်းဘုရင်ကြီးရှိသတဲ့ ။ ဘုရင်းကြီးသံချောင်းရဲ့သက်
တော်ရှည်အမတ်ကြီးကတော့ ဘအုတ်လို့ခေါ်သတဲ့ ။ လွှတ်တော် လည်းရှိသလို ၊ တပ်မတော်
လည်းရှိသတဲ့ ၊ ဒါ့အပြင် ၀န်မင်းများလည်းရှိသတဲ့ ။
“ မင်း အောင်မြင်တဲ့ လူတစ်ယောက် မဖြစ်ချင်ဘူးလား ” “ မင်းရဲ့ ဘ၀မှာ ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ လူတစ်ယောက် မဖြစ်ချင်ဘူးလာ့း့ ”
တကယ် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့ လူတွေအကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာတွေ ဖတ်ပါ။ သူတို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကို လေ့လာသင်ယူပါ။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ကိုယ့်ထက် အကြီးတွေ ပြောနေကျ စကားတွေပါ။ မမှားဘူး ဆိုပေမယ့် အပြည့်အစုံကြီးလို့တော့ မခံယူမိပါဘူး။
“စာတွေ့နဲ့ လက်တွေ့က ကွာခြားပါသေးတယ်” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားလည်း ရှိသေးတယ်လေ။ စာပေကနေ တစ်ဆင့် သိတာတော့ ဟုတ်နေပေမယ့် “တကယ်ကော လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ဖူးသလား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ရှိနေပြန်တယ်။
ရေးရင်း ရေးနေရဦးမည့် အိုရှိုးများ
အိုရှိုးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မရေးတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။
ပြန်ရေးပါလို့ တိုက်တွန်းကြတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကိုဥဂ္ဂါ ပါတယ်၊ ကိုဖြိုးထက်အောင်မြင့် ပါတယ်။ သူတို့ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ အများစုကိုတော့ မအားလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ပေးခဲ့တယ်။ တကယ်တမ်း အဲ့ဒါ လိမ်တာပါပဲ။ ဘာလို့ဆို တကယ့်အကြောင်းရင်းမှန် မဟုတ်လို့ပါ။
Author: lubo601 | 5:42 PM | No မှတ်ချက် |
April 28, 2014 at 4:57am
လူ့ဘ၀ဆိုတာဘာမှန်းမသိသောလောကကြီးထဲ ယောင်လည်လည်နေထိုင်ရလေခြင်းလို့ပဲ စိတ်ထဲအမြဲခံစားနေရတော့တာပါပဲ။ အသက်တွေကြီးလာတာ၊ ဟိုရောက်ဒီရောက်၊ ဟိုလူတွေနဲ့တွေ့ရ ဒီလူတွေနဲ့တွေ့ရ၊ လူမျိုးစုံနဲ့တွေ့၊ နေရာမျိုးစုံရောက် အနာဂါတ်ဆိုတာ တဖြေးဖြေးတိုတိုလာနေခဲ့ပြီ ဆိုတာလည်း သတိပြုမိ။
စကား (၃) ခွန်း
ဒီကနေ့ လောကထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ နေရာ ဒေသ တစ်ခုထဲမှာ အတည်တကျနေနိုင်တယ်ဆိုတာ တော်တော်ရှားပါတယ်။ ဘ၀အတွက် ရုန်းကန်ရတဲ့ နေရမှာ အချိန်နဲ့ တပြေးညီပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက် နေရာထိုင်းခင်းလည်း ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစကား (၃) ခွန်းဟာ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။
Author: lubo601 | 5:38 PM | No မှတ်ချက် |
ဟာသ အသုတ်စုံ (၅)
'ဟလို... ရဲစခန်းကလား၊ အမှတ် ၀၀၇ ရေဝတီလမ်းကို ရဲနှစ်ယောက်လောက် လွှတ်ပေးပါ'
'ဖုန်းမှားနေတယ်၊ ဒါ မက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်'
'အဲ... ဒါဆိုအတော်ပဲ ဟမ်ဘာဂါ ၄ ခုလောက် ပို့ပေး'
" ထာဝရ ကျောင်းသား "
ဘ၀ဆိုတာ တကယ်တော့ ရှေရည်စီမံကိန်းနဲ့သင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းကြီးပါ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာလည်း ထာဝရ ကျောင်းသားတွေပါ။ ရေတိုစီမံကိန်းလို သင်ခန်းစာတွေကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ်အောင်မြင်အောင် ဖြေဆိုကြရပါတယ်။
"အံဝင်ဂွင်ကျမဖြစ်တော့တဲ့ ဟောင်းနွမ်းအက်ဥပဒေများနဲ့ ဥပဒေထက်အရေးပါ အရာ ရောက်နေတဲ့ နည်းဥပဒေများ"
လင်း သက် sharedastatus.
ဒီနေ့ ပြောချင်တာမှ လျှာကို ယားနေတဲ့ အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုပြောပြမယ်...။
လူတော်တော်များများက ပြောလေ့ရှိကြတယ်...(အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာ ပညာရှင်ဆိုသူများ
လည်း ပါကြပါတယ်။)မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေထဲမှာ ဥပဒေပြုရေး
ကိစ္စတွေက ထိပ်ဆုံးက ပါတယ်လို့...။
အဲ့ဒီအဆိုကို ကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး...။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများ သတိမထားမိတဲ့
အမေရိကန်တွင် ယခုနှစ်အတွင်း အင်အားအပြင်းထန်ဆုံး လေဆင်နှာမောင်းများ တိုက်ခတ်
ဖားကန့်တွင် ကြီးထွား လာသော မူးယစ်ဆေး ရောင်းချမှု ဒေသ အာဏာပိုင်များ မျက်ကွယ်ပြုထား
အင်းလျားကန်ပေါင်လုယက်မှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု သံသယရှိသူ လေးဦးကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေ
အိုဘားမားနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေ ဘာတွေပြောကြ သလဲ
ဟင်္သာတမြို့နယ်တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်၍ လူနေအိမ် တစ်ရာခန့်ပျက်
လူ ၇၀ဝ နီးပါး သေဒဏ် အီဂျစ် တရားရုံး ထောက်ခံ
ညောင်ပင်ပြိုလဲစဉ် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆောင်ပေါ်သို့ ပိမိသဖြင့် သံဃာ(၁)ပါး ပျံလွန်တော်မူ၊ (၁)ပါးဒဏ်ရာရ
တောင်ကြီးအတက်လမ်း ကားမီးလောင်မှုတွင် နောင်တရားမြို့နယ် လူဦးရေ သန်းကောင်စာရင်း စာရွက်များပါ လောင်ကျွမ်း
Author: lubo601 | 7:03 PM | No မှတ်ချက် |
ရွှေအိမ်စည်စာကြည့်တိုက် - စာပေဒါနပြုသည်'s photo.
ကျန်မ အလာဂျီ အကြောင်း တစ်ခါမေးဖူးပါတယ်။ လမ်းညွန်မှုအတိုင်း Zyrtec cetirizine Hydrochloride 10mg ကို အမြဲ ဆောင်ထားရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ဘာ Seafood မှ မစားလည်းပဲ၊ ၃ ရက် (သို့) ၄ ရက် တစ်ခါ လောက်ကို ဆေးသောက် နေရပါတယ်။ ပုံထဲအတိုင်း အဖု သေးသေး လေးတွေ စုပေါက် လာပြီး အကြီးကြီး ဖြစ်လာတယ်။
ဂေါတမေ၇ မပြန်လေနဲ့ အောင်ခြင်းကိုးပါး “ဒေါက်တာ သန်းထွန်း”
2:18 AM ရွှေမော်ကွန်း
အ, ပါပေ့ တင်မိုးရယ်
မင်းတားလို့ ရမတဲ့လား ..။
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၂၆-၄)
Acute Heart Attack Treatment ရုတ်တရက် နှလုံး အတက် ...
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ADB)၏ ၂၀၁၄ မြန်မာ့စီးပွားရေးအလ...
ဂေါတမေ၇ မပြန်လေနဲ့ အောင်ခြင်းကိုးပါး “ဒေါက်တာ သန်း...
.ပျောက်ကွယ်သွားသော အဟုန်နိုင်ငံတော်... ( ၁ )
ပါးစပ် (သို့) ဓါး
*** မေဒေး အစ…. အမေရိကန်က- ***
Myanmar Youth Media Club 24 Apr 2014
နည်းပညာမြင့် အိတ်ဆောင် Printer
* လူငယ်တို့၏ မှားယွင်းသော ဘာသာရေး လေ့လာမှု *
" ဇိမ် ခန်း "
ရောင်စုံ သက်တံ့နှင်းဆီ - Rainbow rose
ဟာသ အသုတ်စုံ (၃)
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မမျှဝင်သင့်သော ကိုယ်ပိုင်အချက်အလ...
ဟာသ အစုံသုတ် (၂)
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မဝေမျှသင့်သော ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက...
" အမေအိုနဲ့ကားဂိတ် "
မင်းဒင်ရဲ့သက်ခိုင်(၂) အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည် အခန်း(၃၁)
ဟာသ အစုံသုတ် (၁)
ကိုယ့်ကိုကိုယ် တောင် သတ်သေသွားလောက်တယ် ...
Myanmar Youth Media Club 19 Apr 2014
*** တရားအားထုတ်ခြင်းဟူသည် ***
မော်လမြိုင်မှ ကျိုက္ခမီပင်လယ်ကမ်းခြေသို့ ၅၅ မိုင် ခ...
Myanmar Youth Media Club 18 Apr 2014
ပန်းနုရောင် နှင်းဆီ၏ ဆန်းကြယ်သောအဓိပ္ပါယ်